I thinkanew virus — MYSTERY ZILLION
I thinkanew virus
August 2008 edited August 2008 in Antivirus & Virus
I haveaproblem with virus
"YOU HAS BEEN HACEKD"
That letters appear on my desktop with red colour
and in my drive c: and d: some folders become zip files and it can not open, and i can't find them in anyway (cmd, folder option)
All programs can not open
if i open it this letters appear and sounds beeb
"do not entry this zone "
and its appear this
"documents and setting isawindows system folder and required for windows to run probably. It cannot be delete"
and Its deleted "hal.dll" file in system32 folder
so if i restarted my pc ,
I copy that (hal.dll) from other hard disk i can start my pc
What virus that i met?
can you write this for me and others
sorry for written in english
အကြံပြုလိုတာကတော့ Antivirus တစ်ခုခုနဲ့ တစ်ခြားစက်ကဖြစ်ဖြစ်၊ CD Boot နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် scan လုပ်ကြည့်ပါလား။
ဘာ virus လဲဆိုတာတော့ ရှာကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
virus ထိသွားလို့ဗျို့.. ကူညီကြပါအုံး. (:((:((
Data file folder တွေ အားလုံး .exe တွေဖြစ်ကုန်တယ်။
NewFolder ကနေ NewFolder.exe လို့ ပြောင်းသွားတယ်။
kaspersky တင်ပြီး စစ်လိုက်တော့လဲ No virus found တဲ့။ (ကိုစေတန်ရဲ့ kaspersky)
ဒါပေမဲ့.. အဲဒီ Folder တွေကို ဖွင့်လို့မရတော့ဘူး. Folder.exe တွေ အားလုံး 302kb တွေချည်းဘဲ။
.exe တွေ ဖျက်လိုက်တော့လဲ... System file တွေ ဖြစ်ကုန်ပြန်ရော။
NewsFolder (အရင်က Folder ပါ) (1MB &2MB etc)
NewsFolder.exe (Application File Type) (ယခုဖြစ်သွားသည့်ပုံ) (All folder are 302 kb)
NewsFolder (System File Type) (.exe အား ဖျက်လိုက်လျှင် ဖြစ်သွားသည့်ပုံ)။ (All foler are 302 kb).
ngepuu wrote: »
အဲဒါကတော့ တွေ့ဘူးတယ်ဗျ... start menu ပျောက်ကုန်တယ်... နောက်ပြီး virus ပုံစံက zip folder လေးနဲ့ exe တွေအများကြီးပေါ်နေတာကိုတွေ့၇မယ်။ ကျွန်တော်က deep freez တင်ထားတော့ restart ချလိုက်တာပဲ ဘယ်လိုသတ်ရမလဲ ရှာပေးမယ်။ နားငြီးတာတော့ အမှန်ပဲဗျ
New Folder က hidden ဖြစ်သွားတာပါ။ Tools အောက်က folder options ကိုပြန်ဖော်ပြီး Show hidden file ကို check , Hide protected OS files ကို uncheck လုပ်လိုက်ရင် folder ကို မြင်ရမှာပါ။
Folder options ဖော်နည်းကိုတော့ MZ မှာဖြစ်ဖြစ် google ကနေ ရှာရင်တွေ့မှာပါ
thank you ko saturngod
Folder Option ဖော်ပြီးကြည့်ပါသေးတယ်။ hidden file ဖြစ်သွားခြင်း မဟုတ်ပါ။
ဒါကြောင့် Window ကို repair ပြန်လုပ်လိုက်တာပါ။ အဲဒီမှာ စတော့တာဘဲ... file folder တွေအားလုံး .exe တွေ ပါလာတာပါဘဲ.
kaspersky က worm.win32 autorun.lng
most of the virus features is hidden folder option, kill the task manager, and block the
so this software is very useful to solve above problem
2 copy to your flash drive
3 don't double click the your flash drive icon
4 R- click and open explorer
5 and run the ultimate washer
6 and see the registry
7 uncheck the all of function
8 and then see the start up option and delete the suspect program
9 and then go to the process and kill the unexpected program (eg. system.exe)
all of the task complete, restart your computer
I wish u to successful
Folder Option ပျောက်ဆုံးပါက ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း
Start\_Run ကနေ "regedit" လို့ရိုက်ထဲ့ပြီး Registry Editor ထဲကို၀င်လိုက်ပါ။
Explorer ကို Right click\_New\_DWORD Value ကိုရွေးလိုက်ပါ။
ညာဘက်မှာပေါ်လာတဲ့ 'New value #1' ဆိုတဲ့နေရာမှာ "nofolderoptions" လို့ရိုက်ထည့်ပြီး ထိုစာသားပေါ်ကိုပင်
Right click\_Modify ကိုရွေးပြီး ပေါ်လာတဲ့ box ထဲက Value data မှာ '1' လို့ပြောင်းလိုက်ပါ။
Windows ကို Restart ချ လိုက်ပါ။
Windows ပြန်တက်လာရင် ထိုနည်းအတိုင်းပြန်၀င်ပြီး Value data မှာ '0' လို့ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါ။
နောက်တကြိမ် Windows ကို Restart ပြန်ချ လိုက်ပါ။
folder options ပြန်ရောက်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အကိုကြီး တွေ ဆီ က copy ပေးထား တာ ပါ .......
ရှာ နေ ရ မှာ စိုး လို .................
အကိုတို ့ဖြစ်နေတဲ့ new virus ပြသနာလေးကို [email protected] လိပ်စာနဲ့အဲဒီ virus အကြောင်းပို့့လိုက်ပါလား ခင်ဗျာ။ နောက်ထွက်တဲ့ kaspersky update မှာ ပါလာလိမ့်မယ်လို့ဖတ်ရပါတယ်... ဒါကြောင့် ပို ့ကြည့်တာ မမှားနိုင်ဘူးလို ့ထင်ပါတယ်။
hal.dll နှိပ်စက်လိုက်တာ.. DATA တွေ ကုန်ရော.
HDD လေး partition ပြန်ချ၊ Format ပြန်လုပ်။ Window ပြန်တင်ပြီး အခု စက်အဟောင်းကြီးမှာ window အသစ်လေးနဲ့ပေါ့။။
နောင်ဆို ဘာမှ မဖွင့်တော့ဘူး.. တားတားကျောက်ကျောက်။ (
As for me, I faced this problem on last Sunday. Fortunately, this virus do not delete HAL.DLL, delete only user's documents. Now, I found the virus by using Kaspersky Internet Security 2009 (Ver. 8.0.0.357) with updated virus data (11.8.2008).
In my machine, I found2viruses, Trojan.Win32.Agent.kq (C:\_WINDOWS\_SYSTEM32\_SVEHOST.EXE) & Worm.Win32.Autoun.cns (C:\_WINDOWS\_SYSTEM32\_EXPLORCR.EXE).
Before that, I used ESET NOD32 Business Edition. But, no luck for this virus. So, now, I got head ache what is the most reliable Antivirus S/W.
Trojan.Zlob အဲ့ဒီ trojan တစ်ကောင်စက်ကို ၀င်လာပါတယ်။ symantec က တော့၀င်လာတယ်ဆိုပြီးပြပေးတယ်။ ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ပြီတဲ့။ (အဲ့ဒီ delete တွေ ဘယ်နားသွားထားလဲမကြည့်တတ်လို့။) ပြီးတော့ Trojan.Zlob ကို google လိုက်ကြည့်တော့။ backdoor program ဆိုပြီး၊ remote control လုပ်တယ်တဲ့၊ အဲ့ဒါဆို ဒီစက်အတွက် ပြသနာရှိပါသလား သိချင်လို့ပါ။ :P
Now I have solve my problem
I format my harddisk and reinstall windows (copy some files to another pc)
But i want to know what was that virus
i have lost my some data (but not too important)
forgive me for written in english
i can't write in myanmar